Saalisaawwii Minilki (Minilki III) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSaalisaawwii Minilki (Minilki III)
Saalisaawwii Minilki (Minilki III)
Damee Boruu: Waxabajjii 14/2020
Kononeel Abiyi hojiin akka mul’ata isaa Saalisaawwii Minilki (Minilki III) of godhee jira. Kaayyoo fi akeeka Daagimaawwii Miniliki hojii irra olchuuf amma humna isaa shaakalaa jira. Milkaa’uu fi dhiisuu yaroo fi Waaqa duwwatu gargar baasa.
Waraanni Dagimaawwii Minilki mindaa ittiin jiraatu hin qabu ture. Mindaan isaa qawween uummata Oromoo saamee fi dirsisee jiraachuu dha. Uummatni wraana isaa kana sooru fi tajjaajiluu akka qabu labsiin dabrsee jira. Uummata injifatamee nyaatu duwwaa utuu horii barbaadu qalatee nyaachuu fi kan barbaade fudhatee yoo deeme mirga qaba. Kan nama gadisiisu Uummtni Oromoo yoo gabaree illee jiraatee qabeenyaa fi mirgi isaa isaaf kabajamuu hin danda’u. Wal quunnamtiin ture kan grboofataan waan barbaade hojjetuu fi fudhatu kan garboome immoo waan hunda dhabu ture. Nyaata isaa iyyuu qopheessuuf kan nyaachisu uummata. Nama mitii fardaa fi gaangee isaanii garaa safaranii akka qalaban uummata itti hiru. Yoo garaan fardaa yookan gangee hiri’ate adaba qaba. Kononeel Abiyi hojiin akka mul’ata isaa Saalisaawwii Minilki (Minilki III) of godhee jira. Kaayyoo fi akeeka Daagimaawwii Miniliki hojii irra olchuuf amma humna isaa shaakalaa jira. Milkaa’uu fi dhiisuu yaroo fi Waaqa duwwatu gargar baasa.
Waraanni Minilki horii Uummata Oromoo qalee nyaachuu yoo barbaadee fudhatee galuuf seera Minilki isa aangessa. Warri diduu ajjeessuu fi mana wajjin gubanii Uummatni Oromoo rommee, sodaatee akka afaan qabatee bulu gochuun tooftaa isaa duraa ture. Oromoota Naannoo Finfinnee jiraachaa turan kan akka Abbichuu, Galaan, Gulallee w.k.f. akaakayoo Minilki Saahile Silaassee irraa jalqabee mana irratti gubuun buqqatanii akka gara Arsii, Baalee fi Booranatti baqatan godhamaniiru. Saahile Silaaseen yoo Oromoonni gibira baasuu didan mana wajjin gubee akka warri hafe sodaatu gochaa akka ture namootni Awuroopa yaroo sana achi turan gabaasanii jiru.
Hattuun aangoo dhiiga ilmaan Oromoon dhufe gabaa keessatti butee fudhatee fiigaa jiru sanyii duguggaa Miniliki Lammaffaa sana ifatti hojii irra oolchaa jira. Kononeel Abiyi hin himatiin malee Minilki Sadaffaa tahee jira. Tahuu isaa guyyaan itti labsatuus fagoo tahuu dhiisuu danda’a. Wallagaa fi Gujii keessatti Shannee dha jedhanii Oromoota irratt mana gubuus tahe mana wajjin gubuun haaraa miti. Waraanni isaa mana Oromoo gubee yaroo suuraa wajjin ka’u ammam akka gammachuu qabu agrsiisa. Kunis akeekni waraana kanaa Uummta Oromoo ajjeessuu duwwaan utuu hin taane qabeenya isaa mancaasanii beelaa fi hiyumaan lafa irraa dugugamee akka badu itti tilmaamee kan hojjetamaa jiru akka tahe ragaa dha.
Uummatni Oroomoo Booranaa horii horsiisee jiraachuun beekama. Waraanni Abiyi akkuma waraana Minilki Lammaffaa horii Uummata Oromoo qallee nyaachuu itti fufee jira. Uummaticha beelaan adabuuf jecha horiin akka summiin dhumuus gochaa jira. Bakka bakka itti immoo midhaan akka hin makaramne gochuu, meeshaa qonaa kan gindii fi qanbarii fakkaatu gubuu, buna, geeshoo, caatii fi boqoloo ciranii balleessaa akka jiraan Uummatni Oromoo bakka bakka watiwaachaa jira. Uummata uuman beelaaf saaxilame akka caalaatti beelaan dhumu gochaa jiru.
Humni amma biyyan bulchaa jedhu kun seera mataa isaa cabsee Mootummaa qabu diige shiftaa fi sirna dhalbeessa tahaa jira. Kana booda walii gala sabaa fi sab-lammiin Impaayyera Itoophiyyaa keessa jiru akka Mootummaan hin jirre hubatee shiftaa kana of irraa kaasuu malee filaata bira hin qabu. Biyya Ameerikaa keessatti waan Poolisiin adiin tokko nama gurraachaa seera malee ajjeesseef qaanqeen fincilli uummata cunqurfamaa dhowwee biyya lafaa hundaa waliin gahaa jira.
Har’a biyyaa lafaa keessatti uummatni ka’ee mallattoo cunqursaa kan tahe siidaa garboofattuu caccabsee gataa jira. Qaanqeen Fincilla Cunqursaa kun akka belbelaa Oromiyaa geessu mamii hin qabu. Utuu uummatni keenya beelaan dhumaa jiruu siidaa Minilkii fi Haayilee Silaasee haaraa namni dhukkubsataan mataa keenya irratti ijaaruun madaa keenya irratti mukukkula kaa’uu dha. Kana booda biyya lafaa kana irratii yaroon siidaa garboofatuu taa’anii dowwatan hin jiru. Kan nu irra jiru kan kaas’ee of irraa buqqisu nu malee ormi biraa dhufee nu hin gargaaru.
Namicha B. j. Biraanuu Julaa jedhamu kana maaloo jeneraala jettanii maqaa jenerala hin balleessina. An nama hojii isaan sadarkaa ajajaa waraana qabu nan jaaladha. Kabajaa guddaan qabaafis. Namni jaanja’aan kun innuu utuu jeneraal ofiin jedhee of waamu dhiisee bareedaa dha. Maaloo Yaa Raabbi namootu sobduu fi gowwaa akkana walitti qabdee akka uummata keenya nagaa dhorkatan kan irratti bobeeste? Namni kun afaan isaan Jaal Maroo qabuuf torbaan lama duwwatu gahaa jedhe. Gaafa Jaal Maroon waraana isaa haleelu of duuba deebi’ee dubartii fi ijoollee ajjeessuu irratti xiyyeefa. Waraanni kun nama akka Birhanu Julaa kana irra qajeelfamaa fi ajaja kan fudhatu yoo tahe badii hojjechaa jiruuf itti gaafatamuun rakkisaa dha.
Dheengada kana mucaa kee WBO keessa fidi jedhanii dubartii Tadaluu Olijiraa jedhamtu Wallaga keessatti ajjesan. Sana dura Caalaa WBO keessa fidaa didan jedhanii haadhaa fi abbaa Caalaa bakka tokkotti ajjessan. Dhiigni maatii kanaaf kana hafaan isaan iyyachaa hafa. Ibida tahee isin haa gubu! Ijoollee guddatee maatii biraa baate eenyuu iyyuu barbaadee fiduu hin danda’u. Maatiin kam iyyuu ijoollee isaa barbaadee fiduuf dirqama hin qabu.Silaa utuu dhira tahanii kan qawwee baatu isaan dhaqanii bakka ijoolleen kun jirtu maaliif hin fudhanne. Utuu fuula WBO itti hin bahiin dura akka albaatii fincaan kofoo isaanii guutu dhageenya jira.
Biraanuu Julaa nama WBO dadhabee haadhaa fi Abbaa ajjeessa jiru yaroo inni biyya Misiraa sodaachisuuf dhaadatu dhagee baayyee na dhibe. Biyyi Misiraa waggaa afurtamaaf meeshaa waraana bitatee jrti jedha. Haa tahu malee saayisiin lola immoo nu bira jira jedhe. Maal taha yoo fira qabatee afaan isaa yoo cuqalan. Namichi tafikkii gola isaa keessa mo’uu dhabee, mana gubuu, hormaata barbadeessu, daa’imaa, dubartii ulfaa, haadha ijoolle, haadhaa fi abbaa qabsawwnii ajjeessu maal godhee arba mo’a? Saayisiin waraanaa sanyii dugugaa (genocide) dha jedhee namni Biraanuu Julaa barsiise eenyu? Saanyii dugugaa Uummata Oromoo irratti rawwatamaa jiruuf seera biyyaa lafaatti (International Court) warra dhiyaatan keessa inni isa duraa ti. Kana booda waa’een dhiifama hin jiru. Namnuu akuma hojii isaatti madalamee seeraan gaafatama.
Yaa Uummata Oromoo barri kun akka bara Dagimaawwi Minilki sana miti. Meeshaa waraana heddutu biyya sana jira. Warri kun akkuma amma jalqaban kana namoota waan nyaatu dhabee rakkachaa jiru kanatti qawwee hiranii dhaqaa Oromoo saamaa nyaadhaa jechuu itti fufu. Yoo Oromoo ajjeesanis itti gaafatama akka hin qaban. Kanaafuu Uummata Oromoo saamee jiraachuu kan barbaadu tilmaamuun nama rakkisa. Daandiin Uummatni Oromoo qabu tokko qofa. WBO wajjin dhaabbatee of irraa ittisuu qofa. Warri har’a Borana, Gujii fi Wallaga yaroo dhumaa jiranii teessanii ilaaltan, gaafa isaan of irraa lolanii dandamatan akka dhukkuba covid -19 kana suuta suuta isinitti akka dhufaa jiru hin mamiina. Kanaafu har’a harka wal qabanne kaanee irree tokkummaan of irraa buqqisuun dirqama dhalootaa fi seenaa gatiitti keenyatti baannee jirra.
Injannoo Uummata Oromoof!
IBSA IJAANNOO QEERROO BILISUMMAA OROMOO GODINA ARSII LIXAA
OMN: Bekele Gerba fi Jabeessaa Gabbisa fi Video gara garaa
Lool, it’s even looks like a same shit.
Horoo Buloo Hoffoloo says:
Minilik nama ummata Horoo ykn Arsii jaarraa 16ffaa irraa kaasee tokkummaa isaa ofumaan diigee waalis diigaa ture gaaddisa tokko Itiyoophiyaa jalatti qabbaneessee nagaan akka jiraatan nama godhe balaaleffachuun raatuu of taasisuu dha.
Amantii Islaam ykn Hoffolmaa keessa barsiisa tokko kan ani dinqisiifadhu tu jira.Innis maal jedha yoo naan jettan:
لاءن شكرتم لاذيدنكم
Yoo galateeffattan isiniif eda’ama akka jechuu ti.Maaloo yaa lammii tiyya burjaajii dhiisii wal dhageeffatnee dhugaa qabatnee gara fuul dur haa tarkaanfatnuun dhaamsa koo ti.